Baarlamaanka Soomaaliya oo fasaxay qoondada ciidanka ee miisaaniyadda - BBC News Somali
Baarlamaanka Soomaaliya oo fasaxay qoondada ciidanka ee miisaaniyadda
Image caption Ciidamada Soomaaliya
Guddoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegey in la fasaxay qoondada uu ciidanka ku leeyahay miisaaniyadda dowladda xili wali xildhibaanada ay ka doodayaan miisaaniyadda guud ee sannadkan oo ay soo gudbisey wasaaradda maaliyadda.
Mahad ayaa sheegey in go'aankani ay gaareen guddiga joogtada ee baarlamaanka oo ka kooban guddoomiyeyaasha iyo ku xigeenada 15-ka guddi ee baarlamaanka leeyahay iyo guddoonka baarlamaanka. Waxa uu intaasi ku daray in go'aanka loo gaaray si buu yiri aysan u hakanin xuquuqda ciidamada.
Miisaaniyadda uu soo gudbiyey wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Beyle ayaa muran badan ka dhex dhalisey baarlamaanka, iyada oo wasiirka la weeydiiyey su'aalo badan oo la xiriira sababta qoondada maamul goboleedyada ay u kala badantahay.
Maalinta sabtida ah ee ay taariikhda ku beegantahay 5ta bisha Agoosto ayaa dib loo furayaa ka doodista miisaaniyadda oo sidoo kale hore u soo martay dhagaysi dadweyne markii ugu horeysey.
Dhagaysiga dadweynaha ayaa waxaa xitaa kasoo qeybgalay dadka naafada ah, iyo waliba dadka ka shaqeeya adeegyada caafimaadka oo iyagu sheegey in dumar badan ay u dhintaan umul raac la'aanta adeegyada caafimaadka awgood.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa gali doona fasax kooban marka la gaaro 15-ka bisha Agoosto, kaasi oo la xiriira gudashada waajibaadka xajka, intaasi waxa ka horeeyana waxaa la doonayaa in la ansixiyo miisaaniyadda.
Miisaaniyadda ay soo gudbisey wasaaradda maaliyadda ayaa waxaa markii ugu horeysey ka muuqda qoondo loogu talogalay maamul goboleedyada lixda ah ee dalka ka jira ee kala ah Puntland, Galmudug, Hirshabeele, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland iyo maamulka gobolka Banaadir.
Wareysi ku saabsan Sanduuqa Taakulada Ciidamada Soomaaliya